Aqalka Sare oo isna maanta ka doodaya in dalka laga mamnuuco Shirkadda DP World | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Aqalka Sare oo isna maanta ka doodaya in dalka laga mamnuuco Shirkadda DP World
Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankooda 1aad ee Kalfadhiga 3aad, kaasoo ay uga doodayaan dhowr ajande oo uu ka mid yahay Xeerkii shalay ay meel mariyeen Golaha Shacabka.
Xeerkan oo loogu magac daray Dhowrida Gobonimada iyo Madax banaanida Geyiga Soomaaliya ayaa ahaa mid dalka ka mamnuucay Shirkadda DP World, isla markaana dhamaan waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiisyadii lala galay shirkaddaas oo lagu tilmaamay in ay ahaayeen kuwo aan sharciyad laheyn.
Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa dood adag ka yeelan doona xeerkan, iyadoo lagu wado inay ansixiyaan, si uu Madaxweyne Farmaajo u ansixiyo, isla markaana lagu soo saaro faafinta rasmiga ah ee dowladda.
Dhinaca kale Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa ka doodi doona weerarkii bishii December ee sanadkii 2017 lagu qaaday Guriga Senator Cabdi Qeybdiid, waxaana laga yaabaa in arrintaas ay Guddi u saaraan.
Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ayaa fasax ku maqnaa saddexdii bil ee u dambeysay, waxaana kalfadhigooda Sabtidii la soo dhaafay loo furay si wadajir ah, waxaa labada Aqal hor-yaala howlo adag oo loo baahan yahay inay qabtaan inta uu socdo Kalfadhiga 3aad.